Aragtida guud. Astaamaha iyo asalka | Saadaasha Shabakadda
Waqtiyadi hore aqoon badan uma lahaan kartid koonka adigoo adeegsanaya tikniyoolajiyadda indha indheynta kooban ee waqtigaas jirtay. Marka la eego waxa yar ee laga garan karo bannaanka Dunida, waxaa loo maleynayay in meeraheennu uu yahay udub-dhexaadka koonka iyo in dhirta inteeda kale oo ay weheliso Qorraxda ay inagu meeraystaan. Tan waxaa loo yaqaan aragtida juqraafiyeed curintiisuna waxay ahayd Ptolemy, oo ahaa cirbixiyeen Griig ah oo noolaa 130 AD
Qodobkaan waxaad ku baran doontaa wax walba oo ku saabsan aragtida juqraafiyeed iyo astaamaheeda. Waxaad sidoo kale awood u yeelan doontaa inaad ogaato aragtideeda hoos u dhigtay tan.
1 Dhulku waa xarunta uunka
2 Astaamaha lagu garto aragtida juqraafiyeed
3 Xaqiijinta Kitaabka Quduuska ah
4 Juquraafi iyo aragtida heliocentric
Dhulku waa xarunta uunka
Aadamuhu kumanaan iyo kumanaan sano ayuu ku qaatay daawashada xiddigaha. Fikradda uunka ayaa marar badan wax laga beddelay oo la tirin karaa. Markii hore Dhulka waxaa loo haystay inuu fidsan yahay oo ay ku wareegsan yihiin Qorraxda, Dayaxa, iyo xiddigaha.
Waqtiga ka dib waxaa la ogaaday in xiddigaha may wareejinaynin oo qaar iyaga ka mid ahi waxay ahaayeen meerayaal sida Dhulka oo kale ah. Waxaa sidoo kale la fahmay in Dhulku uu wareegsanaa isla markaana sharraxaadyada qaar laga bilaabay in laga bixiyo dhaqdhaqaaqa meydadka cirka.
Aragtida sharraxday dhaqaaqa meydadka samaawiga ah ee ka shaqeynaya booska meeraheenna ayaa ahaa aragtida juqraafiyeed. Aragtidani waxay sharraxday sida qorraxda iyo dayaxu ay ula wadaagaan meerayaasha intiisa kale cirka. Iyo, sida aad u eegto cirifka oo aad u aragto wax fidsan oo kaa dhigaya inaad u maleyso inuu dhulku fidsan yahay, adigoo u maleynaya in dhulku yahay bartamaha koonkan sidoo kale waa wax dabiici ah.
Dadka hore tani waa wax aad loo fahmi karo. Kaliya waa inaad fiirisaa cirka si aad u aragto sida ay Qorraxdu u socoto maalintii oo dhan, oo ay la socdaan xiddigaha iyo dayaxa. Adigoon awoodin inaad dhulkeena ka aragto banaanka, macquul ma ahan in la ogaado in dhulku uusan aheyn udub-dhexaadka koonkan. Kormeeraha dusha sare, wuxuu ahaa bar go'an oo daawanaya inta ka hartay cosmos-ka oo wareegaya.
Aaminsanaanta aragtida juqraafi ayaa markii dambe la afgembiyay aragtida heliocentric waxaa soo jeedinaya Nicolaus Copernicus.
Astaamaha lagu garto aragtida juqraafiyeed
Waa tusaale samaysanaya koonkan oo la xiriira mowqifka Dunida. Waxaa ka mid ah bayaannada aasaasiga ah ee aragtidan:
Dhulku waa xarunta uunka. Waa meerayaasha inteeda kale ee ku dul socda.
Dhulku waa meerayaal go'an oo ku jira cirka.
Waa meeraad gaar ah oo gaar ah haddii aan isbarbar dhigno qeybaha kale ee samada. Tani waa sababta oo ah ma guurto oo waxay leedahay astaamo u gaar ah.
Kitaabka Quduuska ah waxaad ka arki kartaa bayaanka ah in Dhulku yahay meera gaar ah oo leh astaamo u gaar ah cutubka koowaad ee Bilowgii. Meerayaasha intiisa kale waxaa la abuuray maalintii afraad ee abuurista. Sababtaas awgeed, Ilaah wuxuu mar horeba abuuray Dhulka inta kale ee qaaradaha ah, wuxuu sameeyay badaha oo wuxuu soo saaray dhirta dusha sare. Intaa ka dib, wuxuu diiradda saaray abuurista inta kale Nidaamka qoraxda. Kitaabka Quduuska ah, fikradda ah in abuurka dhulku uu aad uga duwanaa meerayaasha intiisa kale, Milky Way, iwm.
Illaa iyo hadda, dhammaan dadaallada sayniska ee la isku dayayo in nolol laga helo meere kale ayaa fashilmaya. In kasta oo meeraheenna ay ka jiraan kala duwanaansho nooleyaal iyo nidaamyo nololeed oo aad u tiro badan, meerayaasha kale ee bannaanna waxaad moodaa inaysan jirin nolol noocey doonto ha noqotee. Waa deegaan colaadeed. Waxaas oo dhami waxay muujinayaan in Dhulku lahaa xaalado abuuritaan oo ka duwan kuwa kale waana sababtaas tan aan ugu joogno bartamaha koonkan.
In kasta oo ay u muuqato wax is burinaya, haddana Kitaabka Quduuska ah kuma sheegin meel kasta oo ah in Dhulku yahay udub-dhexaadka koonkan, wuxuu sheeganayaa oo keliya in lagu abuuray xaalad gaar ah.
Xaqiijinta Kitaabka Quduuska ah
Caddaynta kale ee tan ku jirta Kitaabka Quduuska ah ayaa ah in aanu sheegin in caalamku dhammaad yahay ama aan la koobi karayn. Marka loo eego aragtida juqraafiyeed, koonku wuxuu ku dhammaadaa derbiga xiddigo go'an. Marka laga soo tago lakabkan xiddigaha waxba ma jiraan. Marna maahan ayaa sheegtay ama bixisay sharraxaad ku saabsan haddii Dhulku ku dhex wareego meel bannaan iyo in kale. Dhammaan macluumaadka noocan ah waxay lagama maarmaan u noqon doonaan inay ka soo horjeedaan Kitaabka Quduuska ah si loo ogaado illaa heerka ay xaqiijineyso mowqifka Dunida iyo sameynta koonka.
Qaabka jireed ee koonku waa mowduuc cilmiyaysan oo soo jiita cilmi-baarayaasha xoogaa. Si kastaba ha noqotee, tani macno kuma lahan kitaabiga ah. Marka la eego Kitaabka Quduuska ah waxba laguma sharaxin dhinacyada jireed ee Dhulka iyo abuuritaanka koonkan, ma sheegan karno inay jirto aragti kitaabi ah.
Juquraafi iyo aragtida heliocentric
Labadan aragti ayaa gabi ahaanba kala duwan, maaddaama ay yihiin moodello fiiriya cilmiga xiddigiska oo leh qaabab kala duwan. Iyadoo geocentrism sheeganayso in Dhulku yahay udub dhexaadka koonka, heliocentrism waxay cadeyneysaa inay tahay Qoraxdu meel go'an oo meerayaasha inteeda kale, oo ay kujirto kuweena, ay ku meegaaranayaan hareeraheeda.
In kasta oo Aristotle uu xiriir la leeyahay aragtidan, haddana waa Ptolemy oo ku qoray Almagest. Halkan fikradaha kala duwan ee dhaqdhaqaaqyada meeraha ayaa la soo uruuriyay, oo ay ku jiraan adeegsiga baaskiillada gacan ka geysta sharaxaadda meertada. Nidaamkan waa la bedelay oo wuxuu noqday mid aad u adag tan iyo markii uu shaqeynayay 14 qarniyo. Waqtiga uu Nicolaus Copernicus abuuray aragtida heliocentric, kaliya wuxuu u badalay Dunida Qorraxda oo ah udub dhexaadka koonka.
Labada aragtiyoodba waa ku qaldan yihiin xaqiiqda ah in koonku ku dhammaado darbiga xiddigaha go'an. Maanta waxaa la ogyahay in koonku aanu xad lahayn oo ay jiraan waxyaabo badan oo ka baxsan Nidaamkeenna Qorraxda.
Sida aad arki karto, fikradaha ku saabsan bannaanka bannaanka ayaa isbeddelaya markii tikniyoolajiyaddu sii kordho. Waxaan rajeynayaa in macluumaadkani kaa caawin doono inaad wax badan ka ogaato aragtida juqraafiyeed.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Astronomy » Aragtida guud
hello wuxuu iga caawiyay inaan barto nimcada hehehe
Caawinaad weyn !!!
Aad baad u mahadsan tahay, waxay ii ahayd caawimaad weyn, maalin wanaagsan
U jawaab CESAR ALEJANDRO TORRES